Ny Otri-Pivoaran’ny Teknolojia Eto Afrika: Sisintany (Vaovao) Rahatrizay? · Global Voices teny Malagasy
Ny Otri-Pivoaran'ny Teknolojia Eto Afrika: Sisintany (Vaovao) Rahatrizay?
Voadika ny 01 Desambra 2013 3:39 GMT
Mpianatra ao Kampabits. Sary avy amin'ny AfricaHackTrip (cc by-sa 3.0)
Misy ny fiovana eto Afrika. Miroborobo ny toekarena sy ny ara-bola eto amin'ny kaontinanta, ary mety hahatratra 5,6% ny fitomboan-karena 2013, araka ny tarehimarika avy amin'ny Banky iraisam-pirenena. Ny sehatry ny finday fotsiny dia mitàna ny 6,3 % amin'ny harinkarena anatin'i Afrika Atsimon'i Sahara tamin'ny taona 2012, araka ny tatitra avy amin'ny Wall Street Journal. Satria milahatra tsimoramora eo amin'ny fiaran-dalambin'ny teknolojia vaoao sy ny fihavaozana nomerika ny kaontinanta, nahasarika ny mason'ireo marika fantadaza eo amin'ny sehatry ny indostria izy. Anisan'ny indostria goavana manangana foibem-pikarohana sy fisantaran'andraikitra “ho an'i” Afrika ny Google , Microsoft ary ny IBM. Vokatr'izany, fikambanana madinika afrikanina maromaro no naka tombontsoa tamin'ireo indostria goavana ireo mba hanangana sy hanamafy ny fahaiza-manaony.
Isan'andro ihany koa dia voasariky ny fitomboan'ny sehatry teknolojia Afrikanina ireo ekipa manam-pahaizan'ny teknolojia sy ireo mpientanentana ka mahatonga azy ireo matetika hiroso hanavatsava “hikaroka ravin'ahitra”. Iray amin'izany ohatra ny AfricaHackTrip, ekipa Eoropeana mpankafy ny teknolojia izay nanatontosa fitsidihana naharitra 5 herinandro mba hanao fikarohana momba ny tontolon'ny teknolojia ao Afrika atsinanana. Nijanona tao Kampala, Kigali, Nairobi ary Dar es-Salaam ny ekipa, firenena efatra manana « iHubs » malaza indrindra ao Afrika. Nahitàm-bokatratsara ny fandraisana ny tetikasa tao amin'ireo firenena efatra notsidihan'ny ekipa AHT ireo. Tao Kampala, nitsidika ny KampaBits, sekoly fampianarana ho an'ny tanora niangaran'ny vintana fanomezana endrika ny habaka, fanaovana printy ny bikantsary ary fampivelarana ny tranonkala, izy ireo ka nankasitraka tanteraka ireo hevitra sy fampaherezana nentin'ny ekipa AHT ho azy ireo ny mpianatra.
Fanehoan-kevitra tao amin'ny Facebook avy amin'ny bilaogy #AHT.
Tetikasa hafa sahala amin'izany koa ny Startup Bus Africa. Afrikanina 15 sy mpandraharaha iraisam-pirenena 15 no niditra amin'ny lalan'ny fandraharahana mba hanorotoro hevitra sy hametraka ny fepetra ho amin'ny fanatanterahana izany. Sambany ny bus no nanavatsava an'i Afrika ny 18 hatramin'ny 22 Novambra, niainga tao Harare ao Zimbabwe ka nipaka hatrany Le Cap, tao Johannesburg ary tao Bloemfontein any Afrika Atsimo. Mpanao kaody html (50%), mpanao haibika tranonkala (25%) ary mpandraharaha mpanangana laminasa (developpeur) (25%) izay miompana avokoa amin'ny sehatry ny finday, fahasalamana (fitsaboana) ary ny angovo izy rehetra ireo. Iray amin'ny vokatra maro notazana tamin'ny dian'ny Bus ny sehatra Sterio.Me no iray tamin'izany, izay mandrisika ireo tanora mpianatra tambanivohitra Afrikanina handray fampianarana amin'ny alalan'ny antso an-telefonina ho fanamafisana ny fianarana ivelan'ny sekoly. Nifanatona ihany koa tamin'ny mpampiasa vola ihany koa izy ireo nandritra ny dia teny an-dalana.
Iza no mila tabilao fotsy raha mandefa fanamarihana sy varavaran-kely (window) ao amin'izany ianao? Sary avy amin'ny Startup Bus Africa (cc by-sa 3.0)
Tsy isalasalana fa ny olan'i Afrika dia hahita vahaolana ao amin'ny tany Afrikanina ary miharihary fa andry matanjaka indrindra amin'izany fampandrosoana ho an'ny kaontinanta izany ny fikarohana sy ny fananganana laminasa ao amin'ny teknolojia vaovao. Saingy satria ho “sisintany (vaovao) rahatrizay” (indray) ilay kaontinanta, mbola maro ireo zavatra mila vitaina hahatrarana amin'ny fomba mahomby ny famindrana teknolojia, izay antsoina hoe fanamafisana ny tontolon'ny teknokojia eo amin'ny sehatra ara-tsosialy, ara-toekarena ary ara-politika. Tsy azo lavina fa manana otri-pivoarana eo amin'ny sehatry ny teknolojia avo lenta ny kaontinanta saingy ilaina ny mametraka lasitra miavaka ho amin'ny fampivelarana ny teknolojia ho an'i Afrika izay mampiditra milamina na ny kolontsaina tranainy na ny kolontsaina taloha.
Tantaran'ny Lanonana farany
10 Jona 2019Antsafa
09 Jona 2019Antsafa
03 Jona 2018Mediam-bahoaka